PMPF oo ka hadlay hawlgalo
13 Dec 13, 2012 - 2:44:47 AM
Taliska Ciidanka Badda Puntland ‘’PMPF’’ ayaa faahfaahiyey hawlgalo todobaadkan ay ka wadeen deegaanka Garacad oo ka tirsan Degmada Jariiban ee gobolka Mudug oo ay sheegeen in khasaare xoog leh gaarsiiyeen koox burcad badeed halkaasi markab ku haystey ayna hataan go’doon yihiin.
Taliyaha Ciidamada Badda Puntland Admiral Cabdirisaaq Diiriye Faarax oo la hadlay Radio Garowe ayaa sheegey in saddex ka tirsan burcada ay dileen halka afar kalena ay gacanta ku dhigeen ,isagoona raaciyey in Ciidanka ay saddex asakri kaga dhaawacmeen oo haatan la dabiibayo.
Rajo wanaagsan ayuu ka muujiyey taliyuhu inay ku guuleystaan soo siideynta dad afduub lagu haysto muddo ka badan labo sanno oo uu ku darey inay burcadu dadkaasi dhibaateeyeen.
Dadka deegaanka ayaa soo dhoweeyey hawlgalkan ay ciidamada Badda Puntland ka wadaan deegaanka,waxana dhibaatada burcadu noqotey mid soo kartey dadka oo aan laga dooneyn inay ku dhex-noolaadaan.
Halkan ka dhageyso wareysiga Axmed Cawil la yeeshey Taliyaha PMPF